ကလေးနှင့် အပူလောင်ခြင်း - Hello Sayarwon
ကလေးများသည် သေးငယ်ပြီး သိလိုစိတ်ပြင်းထန်ကြသည်။ သူ့တို့နားတွင်ရှိသောအရာများကိုစူးစမ်းလိုကြသည်။ သို့သော် ပူသောအရာ် (ဥပမာ ရေပူ ရေနွေးငွေ့ ဟင်းချက်ဆီပူ မီး နှင့်ပူနေသောအရာဝတ္ထု)ကို မထိရန်သတိမထားမိခြင်းကြောင့် အပူလောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကလေးအသားသည် လူကြီးထက်ထိခိုက်လွယ်သည်။ အမေရိကန် အပူလောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက အပူလောင်ခြင်းကို အနက် အကျယ်အပေါ်မူတည်ပြီးမပြင်းထန်ခြင်း အတင့်အသင့်ပြင်းထန်ြခ်ငး အလွန်ပြင်းထန်ခြင်း ဟုခွဲထားသည်။
အပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူကြောင့်ဖြစ်သောလောင်ကျွမ်းခြင်းသည် ပြင်းထန်မှုအဆင့်မျိုးစုံရှိသည်။ အချို့သော ဆေးကျွမ်းကျင်မှုများကအဆင့်အလိုက် ပထမဒုတိယ တတိယ ရှားပါးစွာ စတုတ္ထဟုခွဲထားသည်။ အချို့ခွဲခြားချက်က အပေါ်ယံ တဝက် သို့မဟုတ် အပြည့်လောင်ကျွမ်းခြင်းဟူ၍ခွဲထားသည်။ တခါတရံ တဝက်လောင်ကျွမ်းခြင်းက အပေါ်ယံနှင့်အနက် ဟုထက်ခွဲပြီး လေးမျိုးဆက်ခွဲထားသည်။
၃။ အပူလောင်ခြင်း။ ရောဂါလက္ခဏာများ။
အပူလောင်ခြင်းပုံစံတိုင်းသည် လောင်သောပုံစံအတိုင်းရှိတတ်သည်( အချို့မီးလောင်ဒဏ်ရာများက ဒီသုံးမျိုးတစ်ပြိုင်ထဲပါသည်ကို သင်သိသင့်သည်)
အပေါ်ယံ သို့မဟုတ် ပထမအဆင့်လောင်ကျွမ်းခြင်း။ ထိုအရာသည် အပီဒါးမစ် အရေပြားအပေါ်ယံလွာသာပါဝင်သည်။ များသောအားဖြင့် နေလောင်သောပုံစံအဖြစ်လူအများကရင်းနှီးကြသည်။
တစ်ဝက် သို့မဟုတ် ဒုတိယအဆင့်လောင်ကျွမ်းခြင်း။ ထိုအဆင့်တွင် အပီဒါးမစ်နှင့် ဒါးမစ်အနည်းငယ်ပါဝင်သည်။ ဒီအဆင့်ကို အပေါ်ယံနှင့် နက်ခြင်းဟုခွဲထားသည်။ ဒါးမစ်အနက်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အပေါ်ယံလက္ခဏာများမှာ နာခြင်း ယောင်ခြင်း ကိုင်ပါကဖြူသွားခြင်း ရေကြည်ဖုပေါက်ခြင်း အမျှင်များတော့ရှိနေနိုင်သေးသည်။
နက်သောဒဏ်ရာလက္ခဏာများမှာ။ နာခြင်း မနာခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။(အာရုံကြောပျက်စီးသည်အထိ နက်နိုင်သည်) စိုခြင်းခြောက်ခြင်း( အဆီအိတ်များပျက်စီးသည်အထိ)ကိုင်ပါကမဖြူသွားခြင်း အမျှင်များမရှိတော့ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
အပြည့်အ၀ သို့မဟုတ် တတိယအဆင့်လောင်ကျွမ်းခြင်း။
အပြင်းထန်ဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ အပီဒါးမစ် ဒါးမစ်အကုန် -အရေပြားအပေါ်လွာနှစ်လွာအကုန်ပါဝင်သည်။ အာရုံကြောအဆုံး သွေးကြော အမျှင် အဆီအိတ် အားလုံးပျက်စီးနေသည်။ အရမ်းပြင်းပါက အရိုးကြွက်သားထိပါနိုင်သည်။
၄။ အပူလောင်ခြင်း။ ကုထုံးများ။
အပူရှိသောနေရာမှ ဆက်လက်မလောင်ရန် လောင်နေသည့်နေရာမှဖယ်ထုတ်လာပါ။
အပူလောင်ခြင်းကို ရေဖြင့်မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်ဆေးချပါ-ရေခဲ ရေအေး သို့မဟုတ် ခရမ်တခုခု သို့မဟုတ် ချောဆီဥပမာ ထောပတ်တို့ကိုမသုံးပါနှင့်။
အဝတ်ထည် လတ်ဝတ်လက်စားတို့ကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ မီးလောင်သောနေရာနှင့်နီးသည့် ကလေး ခါးတောင်းကျိုက်အစဖယ်ပါ။ သို့သော် အရေပြားတွင်းစိုက်ဝင်နေသောပစ္စည်းကိုမဖယ်ပါနှင့်။
လူနာကိုနွေးနွေးထွေးထွေးထားပါ။ စောင်သုံးခြင်း သို့သော် အပူလောင်သောနေရာကိုမပွတ်ပါနှင့်။
အလွာတစ်ဆင့်ဖြင့် အပူလောင်သောနေရာကိုဖုံးအုပ်ထားပါ။ သန့်ရှင်းသောပလတ်စတစ်အိတ်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အနာသက်သာစေသောဆေး ဥပမာ ပါရာစီတမော့သို့မဟုတ် အိုင်ဘူပရိုဖန်ကိုအနာသက်သာရန်သုံးနိုင်သည်။
မျက်လုံးသို့မဟုတ် မျက်နှာထိခိုက်မိပါက တတ်နိုင်သမျှထိုင်ပါ ယောင်ယမ်းခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
အပူလောင်သောနေရာသည် မဲသွားခြင်းသို့မဟုတ် ဖြူသွားခြင်း။
အပူလောင်ခြင်းသည် မျက်နှာ လက် ခြေထောက် လိင်အဂါၤ သို့မဟုတ် အဆစ်တွင်ဖြစ်ပါက။
အပူလောင်ခြင်းက ခန္ဓါကိုယ် ၁၀ %ကျော်ရှိနေပါက။
ကလေးများကို မီးခြစ် သို့မဟုတ် မီးဖြစ်စေသောအရာများကိုပေးကိုင်ခြင်းရှောင်ပါ။
ဆေးလိပ် ဆေးခြောက်သို့မဟုတ် အခြား ဆေးလိပ်ပစ္စည်များ အိပ်ခန်းတွင်မသောက်ပါနှင့်။
ရေအပူချိန်ကို ၁၂၀ မှ ၁၂၅ ဖာရင်ဟိုက်တွင်ထားပါ။ ရေချိုးချိန်တွင် ရေအေးမဖွင့်ခင် ရေပူကိုအရင်ပိတ်ပါ။
ရေနွေးပါသောခွက် ပန်းကန် များကို စားပွဲခုံထောင့် ကလေးများဆွဲယူနေသောနေရာမျိုးတွင်မထားပါနှင့်။
ကလေးအား မီးကိုလေးစားရန် မီးနှင့်မိးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းဖြင့်မဆော့ရန်သင်ထားပေးပါ။ အကျီမီးလောင်ပါက ရပ် လှဲ လိမ့် ဟူသောမီးငြိမ်းပုံကိုသင်ထားပေးပါ။
အသက်အရွယ်မျိုးစုံတွင်အပူလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောမီးလောင်ခြင်းဖြစ်ပါက အသက်ရှင်သောလူ မိသားစု သာမက သူငယ်ချင်းများပါ စိတ်ပင်ပန်းစရာဖြစ်စေသည်။ ထိုကြောင့်ထိုသို့အပူမလောင်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းများပြုလုပ်သင့်သည်။
Burns. https://medlineplus.gov/ency/article/000030.htm. Accessed August 20,2016
Thermal ( Heat or fire) burns. http://www.emedicinehealth.com/thermal_heat_or_fire_burns/article_em.htm#thermal_burns_overview. Accessed August 20,2016
Types of burn injuries. http://www.yourlegalguide.com/burn-injury-types/. Accessed August 20,2016
Burns and scalds. http://www.nhs.uk/Conditions/Burns-and-scalds/Pages/Introduction.aspx. Accessed August 20, 2016
Thermal burns. http://emedicine.medscape.com/article/1278244-overview#a1. Accessed August 20,2016